All aad doonayso inaad ogaato oo ku saabsan Spotify Premium
Spotify waa adeeg dhegeysiga in kombiyuutarada desktop, iyo sidoo kale qalabka mobile sida cell-telefoonada ama kiniiniga adeega waxaa laga heli karaa dalal badan oo Yurub iyo sidoo kale in United States. Inkasta oo uu leeyahay version ah oo lacag la'aan ah, Spotify kale oo uu leeyahay version Premium oo bixisa ka badan fursadaha (sida isticmaalka Spotify 3 qalabka) iyo sidoo kale kuwa u furaysaan commercials kaas oo noqon kara, ogolaanaysaa noqoto qof daacad ah, kuwo ku niyad-jab. Si kastaba ha ahaatee ogolaanaysaa bilaabi Aasaaska.
Qeybta 1: Your dalka aan la taageeray by Spotify? Dhibaato ma ah!
Qeybta 2: ? Spotify lacagta caymiska hordhac, waxaa haboon u
Qeybta 3: Spotify Free Vs Unlimited Vs Premium
Qeybta 4: Halkee si aad u hesho lacag caymiska Spotify bilaash ah ama qiima dhimis
Qeybta 5: Sidee Inay Heshiis Shaqsi ama joojin premium Spotify
Part 6: Download music Spotify aan premium
Part 7: TunesGo - download Spotify - Spotify ka dhigi doonaa sida aad isha music shakhsi
Qeybta 1: Your dalka aan la taageeray by Spotify? Dhibaato Ma!
Spotify taageertaa dalal badan oo adduunka ah oo dadka isticmaala ku nool dalalka abuuri karaan account Spotify aan arrimaha kasta. Si kastaba ha ahaatee dadka isticmaala aan nasiib ku nool yihiin dalalka sida, kuwaas oo sida muuqata waxay xaq u leeyihiin xal lahayn? Wrong, qof kasta oo abuuri kara xisaabta Spotify ah, ilaa iyo inta uu isagu / iyadu uu leeyahay internet-ka. Dhibaatada waxa ay tahay in Spotify aqoonsan yahay dalka Cinwaanka IP ee dalkaaga, waxaad naafo ka abuuraya xisaab aad u gaar ah. Laakiin taasi waa wax si fudud loo hagaajin karaa.
Talaabada 1: Tag Vpngate.net, guji Download iyo soo bixi SoftEther VPN Client + VPN Gate Client koronto-in . Waraaqda software ah oo ku xidh isticmaalaya file exe ah.
Talaabada 2: Orod barnaamijka iyo tani waa in aad ka hesho:
Riix server VPN Gate Public VPN Relay, iyo raadin dalka ee aad gaar ah in la taageeray by Spotify (US ama UK, tusaale ahaan)
Riix dalka oo IP Cinwaanka aad rabto in aad si ay u bartaan, ka dibna riix on Connect in Server VPN iyo aad samaysay. Your Cinwaanka IP ayaa la beddelay oo hadda waxaad samayn kartaa Spotify aad aad u gaarka ah xisaabta, sidoo kale iyadoo la isticmaalayo aad email ama xisaabta Facebook. Isticmaalka VPN Gate ayaa loo baahan yahay oo kaliya marka la samaynayo xisaab adiga ku gaar ah, laakiin ma aha fikrad xun in aad, waqti ka waqti, gasho isticmaalaya iridda VPN.
Qeybta 2: Spotify premium lacag hordhac, waa u qalantaa?
Iyada oo ku xidhan wakhtiga aad wax akhriyaya, qiimaha lacagta rukun bil kasta Spotify ee kala duwan yihiin laga yaabo, markan waqti waa ku dhawaad ​​9.99 oo doolar ama pounds Ingiriiska. Siidi Times bil kasta Spotify ee waa hawl gaalimo badan tan iyo markii ay kala duwan si ay miisaaniyad bil walba qof ayaa sidoo kale needs.As uu aad u ogaato, Spotify bixisaa 3 daydo adeegyada ay: Free, Unlimited iyo Premium, sidaas si ay jawaab buuxda su'aasha ka aan kor ku xusan u baahan doontaa inaan fiirino faahfaahsan oo dheeraad ah muuqaalada walba mid ka mid ah kuwa lagu daydo oo lacag la'aan ah oo la bixiyey.
Si loo muujiyo waxa dalab kasta set, waxaa jiray si kale ma jiro oon ahayn in la sameeyo ginormous jadwalka ladhaafi kari si aad u hayso wax fikrad ah saxda ah waxa aad ku heli aad lacag.
Dhammaan music heli karaa
No Radidiyaha xadeynta
Ciyaaro aad Mp3 u gaar ah oo ku saabsan baahida
Feature Spotify Bulshada
Spotify helitaanka dibadda 14 maalmood 14 maalmood 14 maalmood
Dhegaysiga iyada oo aan wax qash-
(Desktop oo kaliya)
Play Mode Shaandheyn kaliya
(6 track sababi saacadiiba)
Gol leeyahay Tayada Sound
Play Spotify iyada oo qalabka hardware iyo Spotify Connect
Waxaan ku arki kartaa in version Unlimited ma bixiyaan fursadaha kasta marka ay timaado gacanta qalabka qabtay, oo sidaas daraaddeed jaraaidka Unlimited, macno oo keliya haddii aad isticmaasho computer desktop ah.
Sidoo kale offline hab sidoo kale diyaar u ah oo kale adeegyada aan, sidaas darteed Unlimited ma joogo oo dhan waxa sheegtay inuu yahay. Sidaas mustaqbalka fog, haddii aad isticmaasho cell-telefoonada iyo kiniiniyada arrin si joogto ah u riyaaqayaa music Premium aanu aad u badan macno, laakiin ma garato in kharashka Unlimited kaliya 4.99 (euros, oo doolar, ama pounds) oo loogu talagalay dadka isticmaala inta badan desktop ah ama laptop ah waa xal macquul ah.
Spotify bixisaa tijaabo ah oo bil kasta si ay tani tahay hab wanaagsan oo qof kasta si ay u tijaabiso adeegyada dhabta ah ka hor inta wax lacag ah. Marka aad abuuray xisaabtaada Spotify waxaa jira siyaabo aad u hesho badan serice iyo xagga hore iyo wanaagsan in laga bilaabo Free Premium Trial ah.
Trial Premium Free
Si tijaabo ah oo lacag la'aan ah si aad u hesho waxaad u baahan tahay inaad samayso waxyaabaha soo socda:
Talaabada 1: Tag Spotify.com, oo guji aad xisaabta, ka dibna tag Times. Waxaa aad arki doonaa geeska gacanta Premium Isku day inaad ugu sareeya xaq u lacag la'aan ah, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad isticmaasho kaarka deynta ama aad PayPal Account. Ogsoonow in aanad awood u yeelan doonaan in ay isticmaalaan tijaabo Free Premium, mar walba mustaqbalka.
Talaabada 2: Marka hore, waxaad u baahan tahay in ay doortaan habka lacag bixinta aad
Qor sirta Paypal, si ay u soo gasho.
Riix heshii iyo Continue button si uu u dhameystiro aad subscrption.
Fiiro gaar ah: Hubi in ay leeyihiin kuwa 9.99 aad PayPal Account haddii kale amro inay Fidmo Free Suurtogal ma noqon doono. Haddii aadan rabin in aad bixiso lambarka ka dib markii maxkamad ku dhamaado ka eeg "Sida Inay Heshiis Shaqsi ama joojin Spotify premium?" Ka hoos ku qoran.
Waxaa jira mid ka badan si ay u hesho Premium lacag la'aan ah ama ugu yaraan qiimo dhimis.
Si aad uga hesho waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan ka raadiso kala duwan (sida Google) si aad u hesho goobta meesha abaalgudka code oo kale waa la heli karaa. Codes waxay ku siin karaan raad ah oo lacag la'aan ah ama qiimo dhimis Times.
Marka yoou helo Promo Code, tag Spotify Account, guji furto tab iyo geli furaha aad heshay.
Habka lagu bixiyo jaraaidka forSpotify Premium dhab ahaan waa in aad la mid ah sida necbaa isuna Spotify Free Premium Trial, si aad rabto in aad si aad u hubiso tutorial ka kor ku xusan. Sidaa darteed cutubkan aan diiradda saari doonaa kansali aad Times Spotify Premium.
Fiiro gaar ah: Sida ay maxkamad Spotify Free Premium, hubi in aad leedahay cadada lacagta looga baahan yahay lambarka bil kasta, haddii kale ma noqon doonto in aad si uu u dhameystiro aad si awood.
Talaabada 1: Marka aad go'aansato in aad joojisid Times Spotify Premium aad nee doontaa inaad gasho xisaabtaada Paypal mar kale, Riix aan> Profile- My Money, ka dibna tag lacagta My pre ansixiyey-ka dibna riix on Update.
Talaabada 2: Haddii aad leedahay lacagta Amy hore ansixiyey-aad taariikhda, u tag Sifeey Status by wuuna qotomiyey Actrive iyo saxaafadda Tag.
Tallaabada 3: Marka aad ka heli bixinta Spotify horay loo oggolaaday, guji Cancel oo aad samaysay. Si loo hubiyo in jeeg hal mar ka badan lacagaha pre-ansixiyey.
Qeybta 6: Download music Spotify aan premium
Haddii aad hesho qaar ka mid ah song in aad jeceshahay oo aad doonayaa inaan laga yaabaa in ay sii haddii aad mararka qaarkood offline ama laga yaabaa inaad rabto inaad samayso ringtone ka soo baxay waxaa ka mid ah Wondershare Streaming Audio Recorder laga yaabaa in qalab fiican si ay u isticmaalaan in munaasabadda gaar ah.
Marka riix badhanka Rikoodh casaan, Wondershare bilaabi doonaa diiwaan xilligan codka waa la heli karaa.
Ka dib marka aad dhammaysid qoro Wondershare taariikhqorihii Streaming Audio doonaa isla markiiba ID song ee aad imika uun helay aad nafaha lagu kaaftoomi aan loo baahnayn.
Ka dib markii in aad xor u tahay inaad u saxaa, badbaadin sida aad Ringtone oo geliyaan si aad Lugood Library enbling aad waafajinta ringtones aad oo dhan aaladaha Apple aad.
Qaybta 7: TunesGo - download Spotify - dhigi Spotify sida il music shakhsi
> Resource > Download > dhan waxaad u baahan tahay inaad ka Ogaato Spotify Premium